April 2021 – BaHuTuTa
တရုတ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ စားသောက်ဆိုင် တစ်ဆိုင်က သန့်စင်ခန်းဟာ ထူးထူးခြားခြား ပြုလုပ် ထားတာကြောင့် စိတ်ဝင်စားစရာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ သန့်စင်ခန်းကို အလှဆင်ယင်ရာမှာ အမျိုးသမီးပုံစံ အရုပ်တွေကို ပြုလုပ်ထားတာ ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ သန့်စင်ခန်းထဲ ဝင်လိုက်တာနဲ့ ထူးခြားတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ ခံစားရရှိအောင် ပြုလုပ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ […]
စိတ်ပျက်စရာ မျက်စိနောက်စရာတွေဟာနေရာတိုင်းမှာရှိပါတယ်။ တချို့လူတွေက ကောင်းတယ်၊ တချို့လူတွေက ဆိုးတယ်။ တချို့လူတွေက သင့်ကို တုန်လှုပ်ချောက်ချားစေပြန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တကယ့်ကို စိတ်အနှောင့်အယှက် ပေးတဲ့ လူမျိုးတွေရှိပါတယ်။ အဲဒီလိုလူတွေကို သင်လည်း အပြင်မှာ အနည်းဆုံး တစ်ယောက်လောက်တော့ ကြုံဖူးမှာပါ။ ၁။ ပါးစပ်ကို ဖွင့်ပြီး အစာစားသူတွေ။ ၂။ […]
Yura (Girl’s Day) Lisa (BLACKPINK) Kyungri (9MUSES) Nana (After School) Hyuna Girls’ Generation
မိန်းကလေးတွေအတွက်ခေါင်းစားရတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကတော့ ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းခံအကျီတွေပုံမပျက်သွားအောင် ဘယ်လိုလျှော်ရမလဲဆိုတာပါပဲ။သိတဲ့မိန်းကလေးကလည်းသိကြမှာပါ။အခုက အတွင်းခံ၊ဘရာတွေလျှော်တဲ့အခါ အချိန်အကြာကြီးပုံကျနေအောင် လျှော်ရမယ့်နည်းလေးကို သေချာမသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်မှာ ဆိုက်ဒ်မှန်ပြီး တကယ်ကို ဝတ်လို့ကောင်းတဲ့ ဘရာတစ်ထည်ရှိနေပြီဆိုရင် ဒီလိုမျိုး နောက်ထပ်တစ်ထည် ရှာတွေ့ဖို့ကထင်သလောက်တော့ မလွယ်ကူဘူးလေနော်။ဒါကြောင့် ကိုယ်အရမ်းကြိုက်တဲ့ ဘရာကောင်းကောင်းလေးတွေကို အချိန်အကြာကြီးထိန်းသိမ်းထားနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ ပထမဆုံးအချက်အနေနဲ့ ကိုယ့်အတွင်းခံအကျီကို ဘယ်လောက်သဘောကျကျ နေ့စဉ်ရက်ဆက်တော့ မဝတ်သင့်ပါဘူးနော်။ဆွဲသားလို material […]
သင့်ချစ်သူနဲ့ ရွှေလက်တွဲတော့မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဆိုရင် သင့်အနေနဲ့ အနာဂတ်သတို့သားလောင်းထံကနေ တောင်းထားသင့်တဲ့ ကတိတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီကတိတွေဟာ ဘာမှမဖြစ်လောက်တာလေးတွေလို့ ထင်ရပေမယ့် နှစ်ယောက်အတူနေကြတဲ့အခါ တကယ့်ကို အရေးကြီးတဲ့ အရာတွေ ဖြစ်လာတာမို့ပါ။ တောင်းသင့်တဲ့ ကတိတွေကတော့ ၁။ သင့် ပြသနာတွေ ကြုံလာရတဲ့အခါ စိတ်ပျက်စရာပဲကွာလို့ မပြောပဲ သင်နဲ့အတူ […]
ဟိုတယ်အခန်းအပ်ပြီးပြန်တဲ့အခါ ရေချိုးခန်းထဲ သင်ချန်ထားရစ်ခဲ့တဲ့ ဆပ်ပြာခဲ ဘယ်ရောက်သွားမယ် ထင်ပါသလဲ။ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းက ဟိုတယ်တွေမှာ ဧည့်သည်တွေကချန်ခဲ့လို့ လွှင့်ပစ်ရတဲ့ ဆပ်ပြာခဲ အရေ အတွက်က တစ်ရက်ကို ၅သန်းထက်မနည်း ရှိပါတယ်။ အဲဒီဆပ်ပြာခဲ ၅သန်းဟာ မြေမြုပ်ပစ်ရမယ့် အမှိုက်အမျိုးအစားဖြစ်သွားပါတယ်။ တစ်ရက်ဆပ်ပြာခဲ ၅သန်းလေလွှင့်နေတဲ့ကိစ္စကို ကိုင်တွယ်မယ့်ကုမ္ပဏီတစ်ခု ၂၀၁၄ မှာ […]
လေယာဉ် စီးရမှာ တွေးကြောက်နေသူက ကမ္ဘာတစ်ဝန်း သန်းပေါင်း များစွာ ရှိသည်။ အချို့သော အကြောက်လွန်သူ များကား လေယာဉ်စီး ရမည့် အရေးကို တစ်သက်လုံး ရှောင်ကြဉ်ရမည့် အရေး အဖြစ်ပါ သတ်မှတ်ထားတတ် ကြသည်။ လေယာဉ် ပျက်ကျမှုတွေ ဘာကြောင့် ဖြစ်ရသည် ကအစ လေယာဉ်တွေမှာ […]
တခါတုန်းက ရှင်ဘုရင်ကြီးတစ်ပါးဟာသူ့ရဲ့မြင်းစီးသူရဲကောင်းတစ်ယောက်ကိုမြင်းနဲ့ပတ်ပြီးစီးနိုင်သမျှ မြေနေရာအားလုံး အပိုင်စားပေးမယ်လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။မြင်းစီးသူရဲကောင်းလည်း မဆိုင်းမတွဘဲ မြင်းပေါ်ကို ခုန်တက်ပြီး မြေနေရာ များနိုင်သမျှ များများကာမိအောင် မြင်းကို မြန်နိုင်သမျှမြန်မြန် စီးပါတော့တယ်။ သူဟာ မြင်းကို အမြန်ဆုံးပြေးအောင် ရိုက်ရင်း မရပ်မနားစီးပါတယ်။ သူဟာ ဗိုက်ဆာချိန်တွေပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေချိန်တွေ…မှာလည်း မရပ်ခဲ့ပါဘူး။ မြေနေရာ အများဆုံးကာမိအောင်ပါ။မြေနေရာကောင်း အတော်များများကို […]
1. မျက်လုံးချင်းစကားပြောဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါ မျက်လုံးချင်းစကားပြောအောင်လုပ်ပါ။ မျက်လုံးချင်းစကားပြောတယ်ဆိုတာ ချစ်သူတွေကြားချစ်မြတ်နိုးချင်းကို ပိုပြီးတိုးပွားစေတာမလို့ မျက်လုံးချင်းများများစကားပြောတတ်ပါစေ။ 2. သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ပဲနားလည်နိုင်တဲ့ စကားလုံးမျိုးဘာသာစကားမျိုးရှိထားသင့်တယ် သူနဲ့ကိုယ်ပဲနားလည်တဲ့ ဘာသာစကားမျိုး တွေ၊ သူနဲ့ကိုယ်နဲ့စိတ်ချင်းနီးစပ်တဲ့စကားမျိုးတွေကို များများပြောပေးပါ။ ဒါမှစိတ်ချင်းဝေးသွားတာမျိုး မဖြစ်လာနိုင်တော့ပါဘူး။ 3. ကိုယ့်ဘက်ကစောင့်မျှော်နေတာမျိုးထက် သူ့ဘက်ကကိုယ်နဲ့ပတ်သတ်လာရင်စိုးရိမ်စိတ်ပူတတ်တဲ့စိတ်ရှိပါစေ ကိုယ့်ဘက်ကပဲတစ်အားမျှော်လင့်နေတာမျိုးမဖြစ်စေပဲ ကိုယ့်အပေါ်သိပ်ကိုလေးနက်အောင် အတတ်နိုင်ဆုံး သူ့စိတ်ကိုယ့်အပေါ်ပိုရောက်လာအောင် သူ့ရဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကိုယ့်အပေါ်ပိုလာအောင်နေကြည့်ပါ။ […]
သူကိုယ့်ကို တကယ် ချစ် တာလား၊အပျော်လား သိချင်သူများအတွက်ဥပမာ – အောင် ဆိုရင် (အ) တနင်္ဂနွေ၊ ဂဏန်းက 1 ပေါ့။ မင်းဆိုရင် (မ)ကြာသပတေး ၊ ဂဏန်းက5ပေါ့။ ထွန်းဆိုရင် (ထ) စနေ၊ ဂဏန်းက7ပေါ့ […]